Izishoshovu zamaphoyisa aseZimbabwe ngaphambi kokubhikisha - teles
Amaphoyisa aseZimbabwe athi afuna izikhulu eziphikisayo nezishoshovu eziyi-14 ukuze zibuze imibuzo ngaphambi kombhikisho olwa nohulumeni ohlelelwe uLwesihlanu.
Usopolitiki ophikisayo ohlela umbhikisho waboshwa ngesonto eledlule wabekwa icala lokudala udlame. Intatheli enenkululeko ibhekene namacala afanayo okugqugquzela abantu baseZimbabwe ukuthi nabo babambe iqhaza kulo mbhikisho.
Uhlu lwamaphoyisa oludalulwe kwabezindaba luhlanganisa neLungu eliphikisayo, uMnuz Job Sikhala, umholi wezinyunyana, abaholi abasebancane abaphikisayo nezishoshovu zezepolitiki.
Umnumzana Sikhala usekhiphe i-video enxusa abantu baseZimbabwe ukuthi baqhubeke nemibhikisho yenkohlakalo.
Uhulumende usola inxusa laseNtshonalanga ngokuxhasa imibhikisho kanye nokungena ngenkani ezweni ukugumbuqela uhulumeni kaMongameli Emmerson Mnangagwa, icala lokuyalelwa yiNxusa laseMelika.